सरकारको फासीवादी शैली - Jagaran Post
जागरणपोस्ट ३० भाद्र २०७७, मंगलवार ०९:४५ सम्पादकीय
दृष्यमा दुईवटा तस्विरहरु सपाट छन। पहिलो, कुलमान घिसिङ्ग र दोस्रो बामदेव गौतम। घिसिङ्ग मुट्ठीभरका शाषकहरुबाहेक आम नागरिकमाझ अति नै लोकप्रिय प्रशासक मानिन्छन र नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा उनको पुनर्नियुक्तिको लागि आम नागरिक, सामाजिक संजालदेखि लिएर मिडिया हुँदै कलाकारसम्मले उनको पक्षमा एक्यवद्धतासहित सरकारकाई निरन्तर दवाव दिईरहेका दृष्य देख्न सकिन्छ। तर, सरकार यो जनदवाव, जनअपेक्षा र उनको लोकप्रियतालाई देखिसहंदैन। प्रधानमन्त्री भन्छन, कानूनी अड्चन छ। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार भन्छन- कुलमानले पुनर्नियुक्ति पाऊन प्रतिष्पर्धा गरेर आऊनुपर्छ।
अर्कोतर्फ ठिक उल्टो, बामदेव गौतम छन दृष्यमा। पछिल्लो प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा बर्दिया क्षेत्र नं. १ बाट पराजित नेता। एक हिसावले जनताद्वारा तिरस्कृत, अयोग्य। जनताको मतद्वारा पराजित नेतालाई चोरबाटोबाट संसद हुँदै सरकारसम्म पुर्याऊन नेकपाले धेरै बलिदानी दियो। यता सडक, संजाल, मिडिया हुँदै राजनितिमा आम सरोकार राख्ने ब्याक्तिले जनमतद्वारा अनुमोदित नभएका ब्याक्तिलाई संसद हुँदै सरकारसम्म पुर्याऊन हुँदैन, गैरकानूनी कार्य हो। जनमतको घोर अपमान हो, राजनैतिक बेईमानी हो, राजनैतिक भ्रष्टाचार हो, सरकारको फासीवादी शैली हो भनेर चिच्याऊंदै थिए। तर, लोकतान्त्रिक पद्धति, बिधि, बिधान, मान्यताका सबै छानोहरुमा आगो लगाएर अन्त्यमा सरकारले हातमा खरानी लिएर रमाऊंदैछ।
जनमतद्वारा अनुमोदित नभए पनि यता बामदेव गौतम राष्ट्रियसभामा पुगिहाले। निर्वाचनमा पराजित नेतालाई राष्ट्रियसभासम्म पुर्याऊन सरकारलाई कुनै कानून बाधक देखिएन, कहिं कसैसंग प्रतिष्पर्धा गर्नै परेन। न नै प्रधानमन्त्रीले बामदेवलाई राष्ट्रियसभामा ल्याऊन कुनै कानून बाधक देखे, न नै प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारले बामदेवलाई प्रतिष्पर्धा गरेर आऊन भने। अर्कोतर्फ यौटा कुशल प्रशासक, जसलाई आम जनतासम्मले प्राधिकरणमा निरन्तरताको लागि दवाव दिईरहेका छन, सरकारले उनको पुनर्नियुक्तिको लागि कानूनी अड्चनको बखेडा झिक्दैछ, प्रतिष्पर्धाको ध्वाँसो देखाऊँदैछ। सरकारले कुन हदसम्मको फासीवादी शैली अपनाईरहेको छ भनेर यिनै दुई घटनाक्रमले स्पष्ट पार्दछ।
बामदेव र कुलमानको सवालमा सरकारद्वारा मन्चन गरिएका हर्कत फासीवादी शैलीमात्र होईन, राजनैतिक रुपमा नेताहरुद्वारा गरिएको राजनैतिक भ्रष्टाचार पनि हो। जनमतको घोर अपमान हो, राजनैतिक अपराध हो।
निर्वाचनमा पराजित भैसकेपछि पनि अर्को निर्वाचनसम्म धैर्य गरेर बस्न नसक्नु बामदेव शैली जति घातक छ, त्योभन्दा घातक दलहरुद्वारा गरिने राजनैतिक भ्रष्टाचार छ। भ्रष्टाचार केवल आर्थिक लेनदेनको विषयमा मात्र सिमित हुँदैन। राजनैतिक दलहरुद्वारा गरिने हरेक गलत हर्कतहरु पनि भ्रष्टाचार नै हुन। राजनैतिक भ्रष्टाचार।
एकातर्फ कमरेड माधव नेपालले आदर्श सिकाऊंदै हिंड्छन- निर्वाचनमा पराजित भए पनि नेताले ५ बर्षसम्म कुर्नुपर्दैन। अर्कोतर्फ निर्वाचनमा पराजित बामदेव पदबिना पानी बिनाको माछाझैं छटपटिन्छन।
पराजित नेताले ५ कुर्नुनपरे निर्वाचन नै किन गर्नुपर्यो र? राज्यकोषको अर्बौं रकम किन स्वाहा पार्नुपर्यो र? किन यत्रोबिधि नाटक मन्चन गर्नुपर्यो र निर्वाचनको? सोझै नेताका चाहनामा बिजयी हुने सिस्टम गराईदिए त कम्तिमा राज्यकोषको अर्बौं बंच्दथ्यो।
यौटा कम्युनिष्ट नेताले नै लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष निर्वाचनको महत्त्व र गरिमा बुझ्न सक्तैन भने त्यस्तो नेताबाट देशले के अपेक्षा गर्ने र के प्राप्त गर्ने? देशको लागि बामदेव शैली र माधव नेपालको चिन्तन दुबै घातक हुन।
लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेकै निर्वाचन हो। निर्वाचनमा जनताद्वारा अनुमोदित भए संसदमा पुग्ने हो, होईन भने अर्को निर्वाचनसम्म पर्खिएर पुनश्च: जनतामाझ गएर अनुमोदन भएर आऊने हो। लोकतन्त्रको यति सरल र सुन्दर पक्ष हुँदाहुँदै पनि लोकतन्त्रकै मेरुदण्ड भाँचिने गरि राजनैतिक दलद्वारा गरिने बलमिच्याईंले न बिधिको शासन स्थापित रहन्छ, न नै लोकतन्त्र जिवित रहन्छ। सत्ता र शक्तिको आडमा अपनाईने फासीवादी शैली र दलद्वारा गरिने राजनैतिक भ्रष्टाचारले अमूक दल र नेतालाई त क्षणिक आनन्द होला, तर देश भने अस्थिरता र अराजकताको भुमरिमैं रुमलिन्छ। बरु राजनैतिक चेत नहुनेले राजनीति नगरेकै राम्रो।